Adeegga daabacaadda jumlada |Hangzhou Reyoung Imp & Soo saaraha Exp & Soo-saare
4-8 midab daabacaadda litho offset
Keen sawiro tayo sare leh oo dejin kara dhammayn gaar ah oo kala duwan - oo ay ku jiraan laminating, varnishing, foil stamping, embossing, iyo khadadka birta ah.
Flexo (Flexography waa mid ka mid ah qaabka aasaasiga ah ee daabacaadda, oo inta badan lagu isticmaalo warshadaha samaynta jiingadaha iyo sanduuqyada
Daabacaadda Shaashadda Xariirta
Waxqabad heersare ah oo ku saabsan sanduuqyada waraaqaha kraft, sanduuqyada xaashida sabuuradaha iyo sanduuqyada waraaqaha caadiga ah ee laga sameeyay warqadda khaaska ah.
Tayada daabacaadda heer sare ah oo leh midabyo qallafsan iyo sawirro muuqda.Habka qalajinta degdega ah ee laydhka UV si loo kordhiyo awoodda wax soo saarka.
Matte & dhalaalid lamination
Ku dar adkeysi iyo biyo-celin baakaddaada leh filim caag khafiif ah oo cad oo la dahaadhay.Hagaaji dareenka taabashada ee dusha daabacan, adoo amaahinaya dhamaystir siman.
Samee calaamadda, qoraalka ama sawirada oo kor u kaca dusha sare si aad u abuurto dareen 3D.
Shaabadaynta biraha birta ah
Ku dar dhammays bir ah oo sharaf leh oogada baakadaha, taasoo siinaysa dareen tayo leh.
Qorsheeyaha maalinlaha ah, qorsheeye todobaadle ah, qorsheeye bille ah ama qorsheeye sanadeed ayaa kaa caawin doona kordhinta wax soo saarka adoo kala sooca noloshaada si aad diirada u saarto yoolalkaaga.Waxaad si buuxda u habayn kartaa wakhtigaaga talaabo talaabo.Ku haboon xaaska guriga, ardayda ama xitaa qof kasta oo shaqada jooga.
Reyoung waxa ay soo saari kartaa qorshayeeyaha, daboolku waxa uu noqon karaa duub duuban, maqaar PU ah, xidhidhisku waxa uu noqon karaa tolida xadhig ama xadhig.Isku day sida ugu fiican si aad u waafajiso shuruudahaaga.
Sannad kasta, waxaanu daabacnay malaayiin buug oo loox ah daabacayaasha, buuga boodhkayaga waxa lagu daabici doonaa oo si toos ah loogu xidhi doonaa sabuurad dhumuc weyn leh, guud ahaan warqadda 700gsm.Buuggeena looxa waxa inta badan loo sameeyay inuu u adkaysto foorarsiga iyo isku dayga jeexjeexa ee ubadka iyo socod baradka ee khibrada wax akhriska hore.
Reyung ayaa mas'uul ka ah in ay u soo saarto dhallaankaaga buug kasta oo badbaado leh, oo u qalma
Habbee naqshadaynta kaadhadhka salaanta, U DIY kaadhadhkaaga asxaabtaada waxay noqon doontaa mid ka mid ah habka gaarka ah, dhaqameed, laakiin moodo badan oo aad ku muujiso dareenkaaga asxaabtaada iyo qoyskaaga.
Reyung waxa ay ku daabici doontaa nakhshadkaaga, daabacaadda, shaabadaynta foil ama debosing sida fikradahaaga hal-abuurka ah
Daabacaadda Buugga: Buugga Daboolka Adag